platform eSiberia, noma. njengoba ibizwa, Eastern eSiberia Platform, ukuze lihlukaniswe eWest laseSiberia ingenye izinto eyinhloko cwaningo yokwakheka komhlaba Russian. On endaweni yayo has ezifakwa abalulekile amaminerali, ngaphezu, ukutadisha ukwakheka kanye esimweni ezikuso manje Kuyathakazelisa Ngokombono ongokwesayensi. Kugcwele futhi ifomu kwamaphaphu platform laseSiberia vusa izingqondo angaphezu kwelilodwa isizukulwane ososayensi. Ake, futhi sizobe babhekana kanjani nezindaba zokuphila main ezihlobene le ngxenye uqweqwe ezwekazini.
Okokuqala thola ukuthi lapho ngokwendawo kuyisisekelo yesikhulumi laseSiberia. mass zako ezisemqoka itholakala engxenyeni esempumalanga eSiberia waseRussia kuya eSiberia futhi Far Eastern Federal Izifunda. Eningizimu, yesikhulumi kuziwa endaweni ka Mongolia.
Kusukela entshonalanga kuba umngcele engokwemvelo isiteshi River Yenisei, enyakatho - entabeni Byrranga eNhlonhlweni Taimyr empumalanga - uMfula Yelena eningizimu - Yablonovy emikhulu, iba Dzhugdur futhi Pribaikalskaya uhlelo amaphutha.
Isigaba Geological laseSiberia Ipulatifomu liyingxenye Eurasia lithosphere ipuleti futhi itholakala engxenyeni esenyakatho ye-mpumalanga yayo. Entshonalanga ke adjoins eWestern Ipulatifomu laseSiberia, eningizimu - ibhande Ural-Mongolian, empumalanga - Western Pacific zone, futhi emanzini enyakatho-wachela Arctic Ocean ukuthi ingxenye enkulu yonyaka, kufihlwe ngaphansi eqhweni.
Manje ake ufunde indlela akha impumuzo okuhambisanayo yesikhulumi eSiberia ngoba izigidi zeminyaka izinqubo Geological sesakhiwe.
Le ndawo zamazwekazi ungqimba lomhlaba uhlobo ezisekelweni lasendulo, noma cratons. Ngokungafani namanye amaqembu, yasungulwa emuva esikhathini Precambrian, okusho ukuthi yobudala enqunyiwe zokwakheka ezifana eminyakeni million 541. Bakhonza njengoba isisekelo ukwakheka amazwekazi, ekubeni core yabo.
platform laseSiberia ibhekisela ohlotsheni Laurasian. Lokhu kusho ukuthi ngenkathi Mesozoic, kwaba yingxenye nezwekazi Laurasia. Kodwa esikhathini eside ngaphambi kokuba le nkathi iqale ukuthatha ukuma platform laseSiberia lasendulo. Landform waqala ukuthatha ukuma emuva ezikhathini Archean, okusho kungakapheli iminyaka 2.5 billion edlule. Nokho, ngenkathi kancane owawufana yesimanje. Owenza isisekelo yaqedwa ekuqaleni kwenkathi Proterozoic, ekupheleni okuyinto yesikhulumi laligcwele ulwandle engajulile, futhi wathonywa kakhulu ukwakheka ikhava sedimentary. Esikhathini platform Late Ordovician kwaba on ensimini yaleli zwekazi Angarida. Kamuva, yena nabanye amazwekazi omhlaba kwase benziwe nezwekazi olulodwa - Pangea. Ngo Mesozoic, njengoba kushiwo ngenhla, kanye ipuleti laseSiberia Ipulatifomu West eSiberia kanye platform East European, ngemva ukwehlukana Pangea, kwakhiwa Laurasia zwekazi. Ngemva kokuwa yayo yesikhulumi aseSiberia liye abe ingxenye Eurasia.
Yilokho mayelana futhi kwakhiwa Platform laseSiberia.
Isakhiwo platform laseSiberia iyafana ukwakheka kwazo zonke nezinye izingosi lasendulo. Ngezinye isisekelo salo uyisisekelo kwakhiwa emuva Archean futhi ngasekuqaleni kwenkathi Proterozoic. Top isisekelo ihlanganisa kwamadwala ikhava sedimentary, kwakheka zisencane kamuva, ngokuyinhloko ngokuthi imisebenzi umkhiqizo magma. Lokhu kungenxa yokuthi ezikhathini zasendulo kwaba isifunda nge high-mlilo futhi magma iphuma ezibilinini zomhlaba, kwakheka isembozo isicupho. Kodwa ezindaweni ezimbili isisekelo yesikhulumi namanje kuziwa kwamanzi. Ukuhoxa amatshe Precambrian ngaphezulu ibizwa ngokuthi izihlangu.
izakhiwo Solid aqukethe amatshe amathathu: Greenstone, ibhande luyimbudumbudu, kanye orthogneisses eziyinkimbinkimbi futhi umane.
Izihlangu Platform eSiberia
On endaweni yesikhulumi laseSiberia, kukhona amabhodi emibili - Anabar futhi Aldan.
Aldan itholakala engxenyeni eseningizimu-mpumalanga yesikhulumi. I geography kule ndawo ibizwa ngokuthi Aldan ithafa.
Anabar avikele ezincane kakhulu futhi isebenze engxenyeni esenyakatho yesikhulumi endaweni ye-Central laseSiberia Plateau, endaweni eyaziwa ngokuthi i-Anabar ithafa. ukuphakama enkulu yama-ke ngaphezu kogu lolwandle kuba 905 amamitha.
Central ithafa eSiberia
Manje ake sibone ukuthi kubukeka sengathi impumuzo yesimanje yesikhulumi laseSiberia.
Ingxenye esemqoka ye insimu iyona Central laseSiberia Plateau. It ulandelela alternation emikhulu ongaphakeme futhi Amathafa. The esiphezulu ithafa iphuzu - Mount Stone. Itholakala maphakathi neKwaZulu Putorana futhi ukuphakama 1701 amamitha ngaphezu kolwandle. Kodwa ukuphakama isilinganiso Central laseSiberia Plateau elingamamitha 500-800 kuphela. Ngaphezu kwalokho, kuleli ithafa kufanele zabelwe Anabar ithafa, okuyinto sishilo ngenhla nje. Kuyinto Anabarskiy protrusion avikele ebusweni. Iphuzu esiphezulu ithafa - 905 amamitha ngaphezu kolwandle.
Entshonalanga ithafa ozungezayo we Yenisei Ridge, okuyinto kanyekanye ukhonza njengelungu umngcele kuye futhi yesikhulumi laseSiberia iyonke. ukuphakama kwayo ngokwesilinganiso kungamamitha 900 amamitha ngaphezu kolwandle, kodwa ifinyelela esiphezulu entabeni Enashimsky Polkan futhi 1104 m. Esikhathini Yenisei Ridge, amanga yesikhulumi West laseSiberia.
Eningizimu eningizimu-mpumalanga umngcele Central laseSiberia Plateau kuyinto kwase-Angarsk yokhalo. Engamamitha isilinganiso esiphakathi 700 futhi 1000 amamitha ngaphezu kolwandle, esiphezulu - 1022 m.
Empumalanga enyakatho-mpumalanga ye-Central laseSiberia Plateau, futhi kungakho ifomu okuhambisanayo impumuzo yesikhulumi laseSiberia, ngokushelela ku Tsentralnoyakutskuyu plain. Ngenye indlela, it namanje ngokuthi Tsentralnoyakutskoy noma Leno Vilyui Izimfunda ezingasogwini. Ingxenye enkulu endaweni yayo ukuphakama esiphezulu ngaphezu kolwandle ingeqi 100-200 m, kodwa emaphethelweni kuze kufinyelele 400 metres.
Landform platform laseSiberia kunalokho eshelelayo phezu watersheds ingaphakathi. Ngakho-ke, lezi watersheds ukuphakama ingeqi 400-600 amamitha. Ikakhulukazi, le nkulumo ibhekisela imingcele imicengezi we Angara River, Lower Tunguska futhi Vilyuya.
Okunye tincenye ngempumuzo Platform eSiberia
Esikhathini eningizimu-mpumalanga ye-Central laseSiberia Plateau itholakala Aldan ithafa. Ngokungafani izinto ngenhla, akusiyo ingxenye ithafa, kodwa, nokho, ingxenye Platform laseSiberia, emele isivuno phezu crystalline yayo isihlangu. Kuyinto phezu Insimu Aldan Plateau kuyinto iphuzu esiphezulu yesikhulumi laseSiberia, lafinyelela ukuphakama ngaphezu kogu lolwandle e-2306 amamitha. Kodwa ingxenye enkulu yale Highlands has a ukuphakama esingeqile eziyinkulungwane amamitha.
Landform Ipulatifomu aseSiberia ngokwedlulele eningizimu-mpumalanga has a uhlamvu sezintaba. Lapha, eKhabarovsk Territory, elise Dzhugdzhugur ezintabeni. Nakuba ubude isilinganiso eziyinkimbinkimbi ingaphezu kwe-Aldan ezinkangala, intaba ephakeme kunazo zonke Topko kunabayeni usayizi iphuzu esiphezulu ithafa. Intaba esithandweni has a ukuphakama 1906 amamitha ngaphezu kolwandle. Ubude Dzhugdzhugur ezintabeni kusukela enyakatho-mpumalanga kuya eningizimu-ntshonalanga ngasogwini loLwandle Okhotsk ingamakhilomitha angu-700.
Ngakho, siyazi Imibandela, yini ifomu impumuzo yesikhulumi laseSiberia.
Manje cabanga imizimba amanzi oyinhloko yesikhulumi laseSiberia. Njengomthetho, indawo yabo yokuqala kwakuxhomeke sezwe, futhi kuphela ngaleso sikhathi, ngemva buqala, imifula kanye namachibi, olutholakalayo esifundeni imali kahle esikhulu, ngokwabo uqale ukuthonya ukwakheka sezwe.
I mfula ngobukhulu - Yenisey - liwumngcele zemvelo entshonalanga yesikhulumi laseSiberia. Lena enye yezinhlobo ezingu emifuleni Kunawo Wonke Emhlabeni, okuyinto ubude 3487 amamitha.
Ngokwezinga elikhulu umngcele yesikhulumi laseSiberia, kuphela ngalesisikhathi empumalanga, kungenye nomfula omkhulu - ULena. Nakuba ingxenye athwala amanzi alo ngqo kusuka endaweni yesikhulumi. Ubude bayo 4400 km.
Eningizimu yesikhulumi laseSiberia endaweni encane nabo echibini ejulile emhlabeni - iChibi iBaikal.
Phakathi kweminye nemifula emikhulu egeleza ngokusebenzisa Platform laseSiberia, ukugqamisa Angara River, futhi Lower Tunguska Viluy.
Minerals eningizimu Ipulatifomu eSiberia
Manje kumelwe sihlole namaminerali yesikhulumi laseSiberia. Kufanele kuqashelwe ukuthi Mother Nature wabanika esifundeni eziningi eside. Yini wagcina yembathani Eastern eSiberia Ipulatifomu?
isihlangu Aldansky kuyinto isitoreji wangempela nsimbi. Ngaphezu kwalokho, Aldan Plateau futhi misela ithusi, amalahle, mica, ngisho igolide.
Kodwa zigcine elikhulu igolide namadayimane elise ensimini ka Yakutia, okuyinto liyingcebo wangempela Russia. Ezweni elifanayo misela "itshe ezivuthayo" phezu Insimu Yelena amalahle umcengezi.
Ngaphezu kwalokho, izimayini zamalahle yenzeka maphakathi tunguska Irkutsk namachibi ukuthi zitholakala ezindaweni Yakutia Krasnoyarsk futhi esifundeni sase-Irkutsk.
Minerals Northern laseSiberia Ipulatifomu
Amaminerali yesikhulumi aseSiberia engxenyeni esenyakatho-ke, ikakhulukazi bagxila kule nsimu isihlangu Anabar. Lapha kukhona idiphozithi yanoma apatite, anorthosite, titanomagnetites. Copper nickel kuthiwa misela emhlabeni Norilsk.
Kodwa kule uwoyela negesi, kunalapho izindawo e Western eSiberia, endaweni yesikhulumi East-Siberian abampofu. Nakuba eningizimu nasenyakatho Ubuye uwoyela imikhakha, kodwa izinto eziningi ezincane kakhulu.
Isendlalelo ubhedu ukumboza indawo yesikhulumi laseSiberia, kuyinto emhlabathini. Cabanga ngalokho izinhlobo zivezwa esifundeni cwaningo.
Njengoba sazi ukuthi ingxenye enkulu yesikhulumi laseSiberia ihlanganisa Boreal ihlathi, inhlabathi, kwakhiwa lapha zivumelana kulendawo yemvelo. Enyakatho - kuyinto eyiqhwa ehlathini eningizimu - wapheka-ihlathi. Eningizimu, izindawo ezinkulu elalihlala nenhlabathi wapheka-podzolic, ngezinye izikhathi kunezindlela grey ihlathi, ngisho umhlaba omnyama. Kuphela uhlobo yokugcina umhlabathi zonke lezi ezahlukene izinga lokuzala laliphakeme kakhulu.
izici Jikelele Platform eSiberia
Njengoba ubona, yesikhulumi laseSiberia - omunye zokwakheka endala Geological Emhlabeni. Kuseduze amaningi ala masimu imelelwa Amathafa, futhi kuphela imingcele platform lufrenyiwe izintaba iphansana noma amagquma.
Lesi sifunda siyindawo ocebile kakhulu amaminerali ahlukahlukene. Phakathi kwabo kufanele ukugqamisa nsimbi, amalahle, apatite, igolide namadayimane. Kukhona uwoyela, nakuba akusiyo inkomba eyinhloko ingcebo zakule ndawo. Kodwa umhlabathi endaweni yesikhulumi ayinayo okuzala eliphezulu.
Iphutha d3dx9_43.dll: kanjani ukukulungisa?
Umlingisikazi Anastasia Lukyanova: Biography futhi umsebenzi